Top 10 Draịvụ Iweghachite Services s
Data mgbake-aghọ mkpa na ihe omume nke ike mbanye ọdịda. Anyị amaghị ihe oge na-na draịvụ ike ga-ada. Ọtụtụ mmadụ nwere omume ọma nke akwado. N'ụzọ dị mwute, ihe anyị na-arụ ọrụ na ga-efu ma ọ bụrụ na ike mbanye ada ada ke n'etiti a ọrụ.
Na-atụghị anya ihe dị ka adapụsị a laptọọpụ, ihe n'ebe ọkụ ma ọ bụ mmiri ike imebi ike mbanye na na-atụghị anya oge. Na a ọnọdụ dị ka na, ọ ga-abụ ọtụtụ na-enye aka nwere onye pụrụ inyere anyị aka iji na-enweta ọmụma azụ ahụ mebiri emebi mbanye. E nwere ụfọdụ sịrị na-eme kpọmkwem na ọrụ dị iche iche na-eri dị ka dị iche iche ọrụ. Onye ọ bụla bụ na mkpa nke a ike mbanye mgbake pụrụ ịgakwuru ha na ọtụtụ ikpe, ndị a sịrị ndidi ịga nke ọma.
Aha nke ọrụ
Ike mbanye mgbake ìgwè http://www.harddriverecovery.org/ 1-866-938-3475
Gold efu Data Recovery http://www.goldcoastdatarecovery.com.au/ 075-55232384
Vantagetech-emi odude ke United States. Ha na-enye a nso nke data mgbake ọrụ gụnyere ike mbanye mgbake, wakporo mgbake, SSD mgbake, USB mgbake, CD na DVD mgbake, PDA, MP3 ọkpụkpọ mgbake na igwefoto dijitalụ foto mgbake. Ha nwere ike weghachite data si ihe karịrị 35 ike mbanye emepụta, na akụrụngwa gụnyere ji ede na 14 "draịva. Ọrụ ha na-ejedebeghị site interface iche. Ha aka ide, SCSI, FireWire, USB, RLL, MFM, ESDI na ndị ọzọ interface ụdị . Ị nwere ike n'ụdị ọ bụla nke partitions na ụdị faịlụ na draịvụ ike gị na ha ka nwere ike weghachite data. N'agbanyeghị nke software ma ọ bụ ike mbanye ọdịda, mmadụ emehie, virus ma ọ bụ malware, ọkụ ma ọ bụ mmiri mebiri, ị nwere ike ka na-anya maka enyemaka si ha.
Datatechlab bụ a raara onwe ya nye ike mbanye mgbake ọrụ center. Ha nwere ike weghachite data si kasị ụdị nke ike draịva dị ka Seagate, Western Digital, na Toshiba dị iche iche na ihu. Ha nwere ike naghachi data si ike draịva ahụ na-enweghị ruru ka ọkụ, mmiri, okuku, n'ibu ọdịda, PCB osisi ọdịda, na moto ọdịda. Ha na ọrụ bụ ọdabara niile arụ ọrụ usoro gụnyere Windows, Mac, Linux, na Unix. E wezụga ike mbanye mgbake ọrụ, ha na-enye wakporo mgbake, flash ebe nchekwa mgbake, igwefoto kaadị mgbake na ekwentị mkpanaaka mgbake.
Datamechanix ekpuchi ika ike mbanye mgbake dị iche iche na interfaces gụnyere SATA, SCSI na ide. Wakporo ike mbanye mgbake a na-gụnyere na-eje ozi. Ha na-enye ezigbo 24/7/365 ọrụ inyere ndị mmadụ aka aka ha data mgbake ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọrọ onye emergent mgbake, ha otu ga-etinye ya na elu-ebute ụzọ. Dabere na dị iche iche chọrọ, ị nwere ike họrọ a ọkọlọtọ mgbake ọrụ ma ọ bụ ihe expedite mgbake. A ezi ihe bụ na ha ga-enye gị ihe analysis akụkọ na faịlụ dị maka mgbake na ndị ahịa. Ọzọkwa ị pụrụ họọrọ na-esi gị data echekwara na DVD dị ka a na-arụkọ ọrụ. Dị ka ndị ọzọ ọrụ, ọrụ a na-enye mgbake niile nkịtị usoro dị ka Windows, Mac, Linux na Unix, ma na-agụnye Netware, MS-Dos, IBM OS, na Sun Micro.
The UStechlabs bụ otu n'ime Yụnaịteedị Steti data mgbake ọrụ na enye. Nke a kwesịrị ndị fọdụrụ n'ezinụlọ data mgbake na-eweta ọrụ na a afọ 17 akụkọ ihe mere eme. Ha na-ejere bụ tumadi maka wakporo mgbake, ike mbanye mgbake na teepu mweghachi. All mgbake na-mere n'okpuru Klas 100 gburugburu ebe obibi iji hụ ọcha ụlọ mgbake. Na ezi mmekọrịta na ika ike mbanye na enye, ọrụ a ejiri ika ike mbanye mgbake ọzọ mfe iji nweta ihe data si ike mbanye. Ha na-enye ekwentị nkwado 24/7 maka ihe ọ bụla jụrụ na ahịa nwere ike mfe n'okpuru ikpe. The ntụgharị oge nwere ike ịdị iche iche site na-ejere ozi.
DTI Data enye data mgbake ọrụ maka ụdị nile nke anụ ahụ mebiri emebi ike draịva, nke a makwaara dị ka Tempa ike mbanye mgbake ọrụ. Ha nwere ike naghachi data si a nso nke nkwarụ ike draịva gụnyere wakporo usoro, nkesa emerụ ma ọ bụ virus oria ike draịva. Data nwekwara ike natara site mebiri emebi partitions na ọjọọ ndi. Tupu mgbake, ị ga-a ofu price e kwuru na a ga-adịghị mmezi-eri. Ha usoro-achọ ka ị na-akwụ naanị n'elu mgbake nke data gị disk. Ị na-adịghị mkpa iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha adịghị naghachi ihe ọ bụla. Ọzọkwa ha na-enye 24 hour ekwentị ozi na ị nwere ike ase n'oge ọ bụla. Ọzọ ezi atụmatụ nke ha na ọrụ bụ na ọrụ nwere ike na-a free data mgbake software iji. Ọ bụrụ na ị nwere ike iji nke a software naghachi gị data, mgbe ahụ ị na-adịghị mkpa ha na-ejere mgbe niile. Ka ụfọdụ iPhone ọrụ, ọrụ a bụ nnukwu ihe enyemaka ka ha nwere ike inyere ndị mmadụ aka naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ site na iPhone.
Ike mbanye Iweghachite Group
The ike mbanye mgbake ìgwè anọwo na azụmahịa nke fọrọ nke nta afọ iri abụọ. Ikekwe ha bụ otu n'ime ndị kasị ochie data mgbake ọrụ na enye. Ha na-enye ọrụ n'elu niile ụdị ike draịva gụnyere wakporo draịva. All ihu, niile na-arụ ọrụ usoro, partitions na faịlụ na ụdị ike-edozi. Mgbe analysis, ha ga-ịmụta ụzọ dị iche iche na-arụ data mgbake site software ma ọ bụ ụlọ nyocha mgbake. Analysis na ịchọpụta bụ free. Na kwa ha ga-adịghị ana gị ma ọ bụrụ na e nweghị data gbakee. Ha elekwasị anya bụ na draịvụ ike mgbake, wakporo mgbake, nkesa mgbake. Bụrụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịmara ndị ahịa n'ọdịnihu, na i nwere ike ịrịọ maka a free e kwuru. Ha ahịa ọrụ bụ 24/7 na i nwere ike na-akpọ ha maka nkọwa.
The Kroll Ontrack anọwo na data mgbake maka a nkeji iri na ise na narị afọ ugbu a. Ha nwere online na ekwentị nkwado 24/7. A free e kwuru maka data mgbake ga-eme online. Ozugbo ị họọrọ site na ndepụta nke ụdị mgbake, etiti oge na ndị ahịa, mgbe ahụ, i nwere ike ịjụ ha ka mepụta mgbake. Na ihe karịrị 100 data mgbake ọkachamara na ndị ọkachamara, na ihe karịrị 25 afọ ahụmahụ na data mgbake ubi, ha nwere ike naghachi ụdị ọ bụla. Mgbake agụnye wakporo mgbake, ike mbanye mgbake, nkesa mgbake, ọrụ usoro mgbake, nchekwa data mgbake, email mgbake, mobile mgbake na dijitalụ foto mgbake. E wezụga, i nwere ike inwe software si ha ma ọ na-arụ ọrụ. Dị ka ndị ọzọ ọrụ, ọrụ a na-enyekwa free alo maka ndị ahịa.
Gold efu Data Recovery
A na ụlọ ọrụ nwere a raara onwe ya nye data mgbake ọrụ maka niile ụdị nke na diski ike ọdịda na mmerụ ndị e merụrụ. All ezi uche ọdịda na-emeso na data ga-natara na ọtụtụ ikpe. A $ 50 nchoputa na-emetụta ego maka ihe niile ọrụ. Mbụ i nwere iji zipu ike mbanye maka nchoputa. Ozugbo nchoputa a mere, ha ga-enye gị a zuru ezu akụkọ nke nkwarụ, na ndepụta nke recoverable faịlụ na ndị ahịa aka. Mgbe ị dị njikere, ị nwere ike gaba naghachi gị data. Ha na-enye data mgbake si ma mpụga na esịtidem ike draịva, flash draịva, igwefoto dijitalụ, na mobile igwe. Otu ihe pụrụ iche data mgbake ọrụ ha na-enye bụ forensic ọrụ. Ụdị ozi a bụ tumadi kwupụta iwu.
Geeksquad bụ a data mgbake-eweta na-enye gị nzi ọrụ. Nke a bụ ọrụ gosiri dị ka ndị kasị mma online tech support ozi site PCMag. Tupu ha ibugharịa na naghachi data ọ bụla na ụdị ike mbanye, ha mkpa a nchoputa na draịvụ ike gị. Nchoputa eri $49.9. Ozugbo nchoputa a mere, ndị ahịa ịdị iche iche dị ka ọrụ. Mgbake maka ehichapụ na formatted faịlụ bụ $ 200. The mechanically mebiri emebi ike mbanye faịlụ mgbake amalite site $ 450 na oké egwu ọnọdụ mgbake aga n'elu $ 1500. E wezụga data mgbake ọrụ, ha na-enye isiokwu na otú na-agbanwe agbanwe na-aka kọmputa nsogbu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụzi draịvụ ike gị mgbe ị na-azụ gị data, a idozi ọrụ ga-atụ aro.
Flashbackdata bụ otu ụlọ ọrụ na-enye dịgasị iche iche nke keukwu ike mbanye data mgbake ọrụ. Ha na-ejere agụnye data mgbake si raids na nile di iche iche nke ika ike draịva dị ka ndị ọzọ na-enye ọrụ. Mberede nhichapụ nke faịlụ, formatted draịva, dekwasịzie faịlụ na ndị ọzọ dị oké mkpa ga-edozi naghachi gị data si ike draịva. Ahịa nwere ike ịbụ na mebiri emebi ike mbanye rụziri ma ọ bụ igosi data mgbake. Tupu mgbake a free e kwuru a ga-enye gị. Ha nwere nke kasị nso oge nke mgbake na kasị oké ọnụ ahịa. N'otu aka ahụ, ọrụ a na-enyekwa adịkarịghị forensic data mgbake ọrụ.
Olee otú naghachi data si a mebiri emebi ike mbanye
> Resource> Draịvụ> Top 10 Draịvụ Iweghachite Services